Us About - Ningbo Shenhe saarista Co., Ltd
Ningbo SHENHE CO sita., LTD, aasaasay sanadkii 1995, waxa uu ku yaalaa Ningbo City, kaas oo ah bangiga koonfureed ee Hangzhou Bay Sea-gudbaya Bridge. SHB waa soo saaraha ah xirfadeed ee Ghadafi yar iyo weynba sax kubada jeexdin qoto dheer sita, kubad is-waafajin sita, afar dhibcood kubada xiriir sita iyo dhalista kubad aan caadiga ahayn.
Ka dib markii horumarinta joogto ah muddo 23 sano, SHB leh aagga warshad of 40000 mitir oo laba jibbaaran oo leh super shiidi doona line-soo-saarka iyo line-soo-saarka shirka si toos ah, iyo sidoo kale qalab kale processing iyo imtixaanka sare ee in ka badan 200 unug, taas oo constitude cabbirka dhamaystiran, falanqaynta iyo nidaamka baaritaanka. awoodda wax soo saarka waa ay awoodaan in ay wax soo saarka 50 million nooc saa'idka kubada Ghadafi yar iyo weynba. waxyaabaha Our lagu saleyn karaa gaari, engine mooto, qalabka korontada iyo fasalka sare qalab koronto ku shaqeeya. Waxaa intaa dheer, soo-saarka gaari dhalista jecel yahay meel gaar ah oo, qof si gaar ah loo xilsaaray iyo line-soo-saarka. Shayga uu leeyahay tayo xasiloon oo lagu kalsoonaan karo nolosha dheer, xawaaraha sare, iyo load sare, guusha kalsoonida macmiisha. Shenhe sita daboolayaa suuqa gudaha iyo suuqa of USA, Europe, Japan, Taiwan, koonfur Asia iyo dalalka kale iyo gobollada.
Shirkadda aasaasay oo fuliyey qaab-dhismeedka maamulka casriga ah, codsatay nidaamka muhiim maamulka, nidaamka maamulka beerta 5S ah, iyo dhaqanka Kanban, gacanta ku soo saarka ee dhalista baabuurta la ISO / TS 16949, 2009 nidaamka maareynta tayo leh, oo qaadista non-baabuurta la ISO9001: nidaamka maamulidda tayada 2008